प्राचीन छि राज्यका प्रमुख भारादार चाउ ची निकै हृष्ठ-पुष्ट र आकर्षक थिए। कुनै एक दिन विहान उनले लुगा र टोपी लगाएपछि ऐनामा परेको आफ्नो प्रतिविम्वलाई नियालेर हेर्दै पत्नीलाई सोधेः "शहरको उत्तरी भागमा बस्ने स्यु कुंग राम्रो कि म?" उनकी श्रीमतीले जवाफ दिइन: "तपाईं निकै राम्रो हुनुहुन्छ। स्यु कुंग कसरी तपाईंको दाँजोमा पुग्नसक्छ र।"
शहरको उत्तरी भागमा बस्ने स्यु कुं नामको मान्छे छि राज्यको निकै प्रख्यात सुन्दर पुरुष थियो। स्यु कुंगभन्दा आफू राम्रो भएको कुरालाई स्वीकार गर्ननसकेका चाउ चीले आफ्नी कान्छी पत्नीलाई पनि सोधेः म र शहरको उत्तरी भागमा बस्ने स्यु कुंगमध्ये तिम्रो दृष्टिमा को राम्रो छ? "तपाईंभन्दा स्यु कुंग राम्रो छैन" भनेर कान्छी पत्नीले जवाफ दिइन।
एक दिनपछि चाउ चीको घरमा एकजना पाहुना आयो। चाउ चीले पाहुनालाई पनि पत्नीहरुलाई सोधेको कुरा फेरि दोहर्‍याए। पाहुनाले पनि स्यु कुंगभन्दा तपाईं आकर्षक हुनुहुन्छ भनेर जवाफ दिए।
कुनै एक दिनको कुरो थियोः शहरको उत्तरी क्षेत्रका स्यु कुंग नाका ती मानिस चाउ चीसित भेट गर्न चाउ चीको घर गए। त्यस अवसरमा चाउ चीले स्यु कुंगको हुलिया, कद र हाउभाउलाई नियालेर हेरेका थिए। स्यु कुंगको तुलनामा आफू बढी सुन्दर नभएको जस्तो लाग्यो चाउ चीलाई। ऐनामा आफ्नो प्रतिविम्वलाई फेरि नियालेर हेरेपछि आफ्नो अनुभव ठीक रहेको निधो चाउ चीले गरे।
रात पर्‍यो। चाउ चीले खाटमा यताउति पल्टिंदै सोच्नथाले। अन्तमा उनले सोचे: मेरी पत्नीले मलाई माया गरेका कारण मलाई उभन्दा राम्रो भनेको हुनुपर्छ। मेरी कान्छी पत्नीले मदेखि डराएर मलाई उभन्दा बढी राम्रो भनेको हुनुपर्छ। मेरो सहायता पाउने आशाले पाहुनाले पनि मलाई बढी राम्रो भनेको हुनुपर्छ। वास्तवमा स्यु कुंगको तुलनामा म राम्रो छैन।
मानिसहरुले आफ्नो वास्तविकता बुझ्नसक्नु पर्छ। आफ्ना नाता-गोता वा सहायता पाउने उद्देश्य लिएका मानिसहरुको कुराको विवेकपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस कहानीबाट हामीले यहीं वास्तविक सत्यलाई ग्रहण गर्नसक्नुपर्छ।